जनताको पैसामा सखुवापर्सौनी गाउँपालिका अध्यक्ष र कार्यकारीको रजाइँ ! – Mission Khoj
जनताको पैसामा सखुवापर्सौनी गाउँपालिका अध्यक्ष र कार्यकारीको रजाइँ !
प्रकाशित मिति: २०७५, श्रावण २७ गते आईतवार
वीरगंज,साउन २७ । आर्थिक मसान्त सकिएपनि पर्सा जिल्लाको सखुवा प्रसौनी गांउपालिकामा पछिल्ला वर्षको कार्यक्रम अहिले गोप्यरुपमा गरेर व्यापक अनियमित्ता भइरहेको खुलासा भएको छ ।
सखुवा प्रसौनी गाउकार्यपालिकाबाट सम्झौता नभएपनि आधादर्जन समाजिक संस्थाले गाउपालिकाको बजेटमात्र सिध्याउने काम गरेको खुलासा भएको हो । हो असार मशान्त मै कार्यक्रम भएको भनेर चेक काटि सकिएको र अहिले गोप्यरुपमा औपचारिकता गरि फोटो खिच्ने काम मात्र भएको भेटिएको छ ।
गोप्यरुपमा साउन २१ गते गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मधुवन मथवल कार्यालयमा राजस्व परामर्श गोष्ठी भइरहेको सुचना पाएर त्याहा अचानक संचारकर्मीको टोली पुग्दा करिब दुई दर्जन सहभागिमा खैलाबैलानै मच्चियो । हामीले बोलाएकै छैनो कसरी पत्रकारहरु आए भनेर सहभागीहरु एक आपसमा कानेफुसी गर्दै थिए ।
उक्त गोष्ठीकोलागि गाउपालिकाले ३ लाख रकम खर्च देखाएको छ । तर सहभागीहरुलाई भने प्रती व्यक्ती ७ सय ५० रुपैया कार्यक्रमको सहभागी भत्ता भनेर उपलब्ध गराएको एक सहभागीले नाम नछापने सर्तमा बताए ।
त्यसैगरि सोही गाउँपालिकाले साउन ७ देखि १० गते सम्म ७ लाखको लगानीमा महुवनमा गाउसभा सदस्यहरुलाई तालिम दिएको छ । असार भित्रै हुनु पर्ने तालिम आफनो गाउपालीकाको भवन छोडेर यहा बाट टाढा रहेको मधुवन मथवल वडा कार्यालयमा गोपयरुपमा गरिएको स्थानिय महेन्द्र दास थारुको गुनासो रहेको छ ।
यसैगरी साउन ९ मा उक्त गाउँपालिकाले दिपनारायण उच्च मावि औराहामा बालविवाह तथा दाइजो प्रथा विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । वक्तृत्वकला कार्यक्रम आयोजक संस्थासँग सम्झौता नै नगरी गरिएको खुलासा पनि स्वयं गाउपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले गरेका छन् ।
गाउपालिका अध्यक्षले आफुलाई बोलाएपछि मात्र सहभागी भएको कार्यकारी अधिकृत महमद शेरे मुस्तफाले दाबी गरेका छन् । र यस विषयमा आफु केहि नबोल्ने भन्दै गाउपालीका अध्यक्षलाई सोध्नुस भनेर पन्छिने काम गरे ।
बक्तृत्वकला कार्यक्रम हुने दिन बिहान फोन गरी आफुलाई त्याहा बोलाइएकोले कार्यक्रममा सहभागी भए तर यसबारे मलाई केही जानकारी नभएको अधिकृत मुस्तफाले बताए ।
कार्यक्रम समापन पछि वक्तृत्वकलाका विजेतालाई वितरण गरिएको प्रमाणपत्रमा मिति समेत उल्लेख गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले वक्तृत्वकलाका लागि ३ लाख रुपैयाँ निकासा दिने आयोजक संस्थालाई आश्वासन दिएका छन ।
असार मसान्तमा विकास निर्माणको कामले भ्याइनभ्याइ भएकोले केहि कार्यक्रमहरु साउनमा समेत हुन गएको कार्यकारी अधिकृतले स्विकार गरे ।
गाउकार्यपालिकाको निर्णय बिना नै मनोमनी ढंगले बजेट संचालनगरि आफुअनुकुल खर्च भएकोले स्थानिय नागरिकले कुन शिषर्कमा कति बजेट खर्च भयो त्यसलाई सार्वजनिक गर्न गाउपालिकाबाट सुचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दर्तागरि नै सुचना मांग समेत गरेका छन् ।
तर सुचना मांगको निवेदन दर्ता भएको ६४ दिन बिती सक्दापनि निवेदकहरुले सुचना पाएका छैन्न । सुचना माग्दैं अहिले सम्म चार वटा निवेदन परेको दर्ता फाटका कर्मचारीले बताए ।
तर गाउपालीका अध्यक्षले मेरो आदेश बिना कसैलाई सुचना नदिन कर्मचारीलाई आदेश दिएको बुझीएको छ । आफुले गरेको गलत कार्यको ठाकछोप गर्न अधयक्ष तथा कार्यकारी अधिकृतले हाल सम्म भएका प्रगती तथा कामको सार्वजनिकिकरण गरेका छैन्न ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अहिले गोप्य रुपमा गरेर बजेट दुरुपयोग गरेकोले मात्र सखुवा प्रसौनी गाउपालिका चर्चामा आएको होइन् यहा कृषी, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, तथा शिक्षाको बजेटपनि हिनामिना भएको छ ।
गाउपालीकाले खेलकुद समाग्रीका लागी १५ लाखको बजेट छुटयाएको छ । तर गाउपालीकाको वडा नम्बर ३ मा युवाहरुकालागी भन्दै मुनशन युवा क्लबलाई कमशल खेलकुद समाग्री वितरण गरिएको पाइएको छ ।
कमशल खेलकुद समाग्री दिएको भन्दै क्लबका सदस्य सुधिर दासको नेतृत्वमा गाउपालीका कार्यालयमा खेलकुद समाग्री फिर्ता गरिएको क्लबका सदस्य दासले बताए । यस सम्बन्धमा कार्यकारी अधिकृत संग बुझदा केही समाग्रीहरु क्मशल रहेको स्वीकार गरे ।
त्यो कमशल समाग्रीलाई फिर्ता गरी पुन नया अर्को खेलकुद समाग्री वितरण गरीने बताए । आर्थिक वर्ष ७४र७५ असारमा सकिएर हिसाब तथा बेरुजु मिलान भइसकेपनि अहिले बिना अख्तियारी पुरानै बजेट खर्चभइरहेको छ ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्चहुन नसकेको बजेटलाई अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न पुन. गाउकार्यपालिकाको परिषदबाट निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर निगरानी गर्ने निकायको मौनताले स्थानिय सरकारमा आर्थिक कुशासन बढदै गएको छ ।